I-19w Loft - ubunewunewu baselunxwemeni, indawo efanelekileyo - I-Airbnb
I-19w Loft - ubunewunewu baselunxwemeni, indawo efanelekileyo
I-loft yonke sinombuki zindwendwe onguEmily
I-19w loft idala indawo epholileyo yendlu yolwandle. Vuka uye kwi-vista ebukekayo phezu kolwandle kwaye wonwabele isidlo sakusasa kwindawo yakho ebanzi yebalcony, yamkelwe yimpepho epholileyo yolwandle.
Ukuphumla phakathi kwebhulorho kunye nesitrato esikhulu, indawo ephezulu ikufuphi neBarwon Heads imimangaliso yendalo njengoko injalo kwezona ndawo zokutyela zibalaseleyo zedolophu, ivenkile, i-pub, iimarike kunye neendawo zegalufa. Uya kuba kwindawo egqibeleleyo ukwenza uninzi lwendawo yakho yokubalekela elwandle.
Iloft eyi-19w inikezela ngendawo yokuhlala entle ukuya kutsho kubantu abane kumagumbi okulala amabini, igumbi lokuhlambela elinye, izindlu zangasese eziyi-2, ikhitshi elipheleleyo kunye negaraji yemoto enye. Inikezela ngemithwalo yokukhanya kwemvelo kwaye inendawo enkulu kakhulu. Iloft ibonisa ulwandle ngaphaya kwebhulorho. Yeyona ndawo ifanelekileyo kwiqela elinabantu abambalwa losapho okanye abahlobo.
4.94 · Izimvo eziyi-73
Kanye entliziyweni yeentloko zeBarwon.
Ulwandle - 500m
IGA supermarket - ngaphesheya kwendlela
Barwon iintloko pub - ngaphaya kwendlela
Ikhosi yegalufa - 1km
Nceda ungathandabuzi ukunxibelelana nam ngayo nayiphi na imibuzo